Ndị na-eme ihe eji arụ ọrụ na ụlọ ọrụ - ndị nrụpụta ihe nrụpụta dị iche iche nke China
A na-akpọkarị cylinder gas-liquid booster cylinder. A na-ejikọta gas na-eme ka gas na-agwakọta ya na cylinder na uru nke cylinder na mmelite imewe, mmanụ haịdrọlik na ikewapụ iche, ikuku jikọtara na mkpịsị piston nke ọrụ kọntaktị na-akpaghị aka mgbe njem ahụ gasịrị, ọsọ ọsọ, nkwụsi ike, na nnyefe ọkụ ngọngọ ngwaọrụ dị mfe, mmezi mmezi dị mfe, nwere ike nweta ikike dị elu nke igwe hydraulic n'otu ọnọdụ ahụ, obere ume ike, ọdịda dị nro adịghị emebi ebu, ọ dị mfe ịwụnye na ịwụnye cylinder nrụgide pụrụ ịbụ ogo 360 n'akụkụ ọ bụla, oghere a na-arụ bụ obere, adịghị arụ ọrụ nke ịrị elu nke okpomọkụ, ogologo ndụ, obere mkpọtụ, na isi ihe ndị ọzọ. cylgbọ ahụ a na-arụ ọrụ na-eji nrụgide ikuku zuru oke iji nweta ike dị elu nke hydraulic cylinder na-enweghị mkpa maka hydraulic unit.
Sịlị ahụ dị gịrịgịrị bụ akụkụ ọla dị na ya nke a na-eduzi piston ahụ iji kwụghachi n'ụzọ ziri ezi. Onye na-arụ ọrụ ahụ na-agbanwe ike ọkụ n'ime ike igwe site na ịgbasa na sịlịnda ahụ; The gas na-enweta pistin mkpakọ na Compressor cylinder na enwekwu nsogbu. A na-akpọkwa ụlọ nke turbine, rotary pistin engine, wdg.
Mkpụrụ vaịn na-adị nro, nke nwere ngwakọ kọmpụta, ịdị arọ, obere ohere na uru ndị ọzọ
Kwụ mgbochi cylinder
A na-ejikarị ya eme ihe maka nkwụsị nke pallet na usoro mmepụta, ya mere a na-akpọkwa ya cylinder nkwụsị, n'ihi mgbatị ya na-arụ ọrụ, yabụ enwekwara ụlọ ọrụ ndị akpọrọ cylinder fix-range rod.
E nwere ụdị dị iche iche n'ụdị nke hydraulic cylinder, nweekwa ụzọ dịgasị iche iche du: Dịka ụdị zhi na-agagharị, enwere ike kewaa ya n'ụdị usoro mmegharị na ntụgharị ntụgharị; Dịka mmetụta nrụgide nke mmiri mmiri DAO, enwere ike kewaa ya n'otu ụdị ihe na ụdị ihe eji arụ ọrụ abụọ.Dị ka usoro a nwere ike si kee ụdị piston, ụdị plunger, ụdị ụdị telescopic multi-stage, rack na pinion; Dịka ụdị echichi ahụ nwere ike isi kewaa n'ime mkpanaka, ọla ntị, ụkwụ, na-atụkwasị aro, wdg Dị ka mgbali ọkwa nwere ike kere 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa na na.
Typegbọ mmiri dị na hydraulic bụ otu n'ime ụdị nke hydraulic cylinder, bụ DU bụ isi iji mee ka esemokwu haịdrọlik.zhi
Hydraulic cylinder nwere otu ọpụpụ na nke abụọ, ya bụ, mkpanaka piston nwere ike ịkwaga n'otu ụzọ na ụzọ abụọ - enwere ike ịmegharị n'ụdị abụọ.
Sịlịnda na-agagharị bụ ihe na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-eme ka ọ rụọ ọrụ iji mee ka ọ na-agagharị n'ime otu akụkụ. Ejiri maka oghere mmeghe na mmechi na mgbanaka mgbatị, wdg.
Standard cylinder, adabara niile n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ, raara nye ájá mwepụ akụrụngwa na izugbe cylinder akwado iji nke na-eweli valvụ na akpa usu valvụ.